गीत/संगीत Archives - Page 48 of 53 - Purbeli News
गायीका ज्योतीले भनिन्, ‘मेरो अंग हेर्नेलाई मज्जा आउँछ’
काठमाडौं । उही मुलाको सिन्की, उही मुलाको चाना, जालमा पारे काँ पाउला उम्किएर जान, ढाडे बिरालो बोलको गीतमा गरेको हट अभिनय किन नहोस् । यस्ता चर्चित कार्यको चर्चित पात्रको कथा अरु कसैको होईन ज्योति मगर बाहेक ।निक्कै उत्ताउला गीत र अभिनय गरेर दुनियाँ आफै तिर तान्न सफल गायिका ज्योती मगरको जन्म २०४६ बैशाख २९ गते रोल्पा जिल्लाको नुबागाउँ वडानं. ५ डिल्लीर...
‘थ्रि मङ्किज’ चलचित्रको पहिलो गीत ‘बर पिपल छाँयाले’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
पुस, काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘थ्रि मङ्किज’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरीएको छ । ‘बल पिपल छाँया’ले बोलको गीतको भिडियोलाई सोमबार चलचित्र युनिटले सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक गीतमा सन्तोष सुनाम र आकांक्षा बस्यालले स्वर दिएका छन् भने नायिका सरिना बयलकोटीको साथमा रेशम फिरीरी, सरोज केसी र दिलिप तामाङ्ग लगायतले भिडियोमा नृत्य गरेका छन् । गीतमा गोपाल अधिका...
तरकारीवालीलार्इ ब्यङ्ग्य गर्दै यस्ताे म्युजीक भिडीयाे सावर्जनीक
महेश बिक्रम पाण्डे , टिका पुन अनि दिलमाया पौडेलको स्वरमा यतापनी लरक्कै बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । महेश बिक्रम पाण्डेकै शब्द, संगीत अनि अरेन्ज रहेको गीतको भिडियोमा पनि महेश बिक्रमकै अभिनय रहेको छ जसमा उनलाई बर्षा र आरतीले साथ दिएका छन । ज्ञानेन्द्र शर्माको छायाँकन , बिकास धमलाको सम्पादन अनि बिशाल नेपालीको निर्देशन रहेको भिडियोलाई कामना डिजीटलले...
साना गायक संयाेगले ल्याए ७ बर्ष अघी रेकर्ड गरिएकाे चर्चित रास्ट्रिय गीत (भिडीयाे )
सानै उमेरमा नै नभन्नु ल ३, लाटी जस्ता ठुलो पर्दाका चलचित्रमा आफ्नो स्वोर दिइसकेका साना गायक समयोग योगीको ७ बर्ष को उमेरमा पहिलो रेकर्ड गरिएको धेरै पुरानो चर्चित रास्ट्रिय गीत हाल आएर सार्बजनिक गरिएको छ। डि.बि महेश द्वारा रचना/ संगीत अनि स्वोरबद्ध गरिएको उक्त गीत लाई पबिधन राइ द्वारा पुन:सँगीत सङ्योजन गरी ७ बर्षको उमेरमा सम्योग बुवा गाएक शिशिर यो...
आफ्नो मायालुलाई हिरा सम्झिएर मुटुमा सजाउदा धोका खाए पुष्पले (भिडियाे सहित)
काठमाडौँ । वारिमा खोला पारिमा खोला बिचैमा दोभान बोलको गीत मार्फत नव गायक साजन आलेले गायनमा डेब्यु गरेका छन् । छैठौँ बिग आइकनको उपाधि जित्न सफल नव गायक साजन आलेलाई हौसला दिँदै आफ्नो गीतका माध्यमबाट गायक तुला पर्वतले गायनमा डेब्यु गराएका हुन् । जसमा तुला पर्वतको संगीत , ध्रुर्व प्रसाद अमगाईका शब्द समावेश छन् । मोहनराज अधिकारीले भिडियोलाई सुन्दर...
चर्चित मोडल पावती राई भनेपछि मरिहत्ये गर्ने यि पुरुष को हुन् ?
काठमाडौँ । गायक अशोक अर्यालको ‘तिमीलाई हरपल’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अशोका एल्बममा समावेश यो गीतमा चर्चित मोडल पार्वती राइसँग नरेश भिर सिंहले अनस्क्रिन रोमान्स गरेका छन् । जसमा आरजु विष्ट सल्यानीका शब्द शृजनामा गंगाधर पराजुलीले संगीत भरेका छन् । नरेन्द्र बियोगीले एरेन्ज गरेको गीतको भिडियोलाई विष्णु शर्माले सम्पादन गरेका हुन् । कर्ण च...
हङ्कङको रात ‘गजल’ र ‘स्ट्यान्डअप’ कमेडीको साथ
हङ्कङ / हङ्कङ गजल तथा भजन साँझमा सदावहार गायक आनन्द कार्कीले आफ्ना चर्चित गितहरु मार्फत भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरेका छन् । देशभक्ति गित गाउँदै स्टेजमा प्रवेश गरेका कार्कीले ‘लाग्छ मन हेरि रहुँ’, ‘म तिमी बिना मरिहाल्छु नी’, ‘भाकेर बरपिपलु’, ‘बनमा फुल्यो फुल’ लगायत दर्जन बढि चर्चित गितहरु प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा पत्रकार तथा हाँस्य कलाकार श...
ज्योती र भिमको गित चर्चामा (भिडियो सहित )
मलेसिया । गायीका ज्योती मगर संग लोक गायक भिम लुहारले स्वर भरेको गित लण्डनको लाहुरेले लोकप्रियता कमाउन थालेको छ । युटुवमा सार्वजनिक भएको छोटो समयमा नै ६लाख भन्दा वडि दर्शकले सो भिडीयोलाइ हेरेका छन् । भिडियोमा गायीक ज्योती स्वयमले अभिनय गर्नाले पनि सो भिडीयो ले लोकप्रियता कमाएको उत्पादक कम्पनी देश परदेश म्युजिक प्रालीका सन्तोष गौतमले वताए । देश पर...
खेमराज गुरुङको अन्तिम एल्बम सार्वजनिक
काठमाडौं । दिवंगत लोक गायक खेमराज गुरुङको अन्तिम गीति एल्बम‘घुमफिर‘ सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा गुरुङकी आमा तुलसीमाया गुरुङले एल्बम सार्वजनिक गरिन् । एल्बममा खेमराजले शब्द, संगीत र स्वर दिएका ६ वटा गीत छन् । एल्बममा नेपालका विभिन्न ठाउँको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने गीतहरु रहेका छन् । संगीतकार संघ नेपालका अध्यक्ष तथा संगीत...
ज्योति मगरले गीत गाउदागाउदै स्वीटर फुकालेपछि मचियो हंगामा
काठमाण्डौ । पोखराको नयाँ बजारस्थित प्रर्दशनी केन्द्मा जारी औद्योगिक ब्यापार मेलामा जव स्टेशमा हट गायिक ज्योती मगर आइन एकाएक गर्मीको महसुस भयो । कालो वान पसिमाथि रातो जकेट लगाएर स्टेज देखिएकी ज्योती मगरले पोखरेली दर्शकलाई नचाउनुभयो । चोरी खान पल्केको यो ढाडे बिरालो गीत गाउदै दर्शकको वीचमा पुग्दा दर्शक क्यामरामा कैद गर्न ब्यस्त बने । ज्योतीको गीत स...